Blog 1 – Purple Feminist Group
Women Too Have Hpone
YawNi Dot Zagar Wyne
ရာသီလာလို့ ဆိုင်တွေမှာ ‘ဂွမ်းထုပ်’ (Pad) သွားဝယ်ရင် ကျွပ်ကျွပ်အိပ် အမဲနဲ့ ဒါမှမဟုတ် သတင်းစာနဲ့ ပတ်ပြီး ထည့်ပေးလေ့ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ရာသီလာလို့ ထမီမှာသွေးစွန်းသွားရင် ကျောင်းစိမ်းပေါ်မှာ အနီကွပ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ ဟာကနဲ ဟင်ကနဲပဲ။ ရာသီလာတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ‘ငါ့မှာပေနေလား။ ကြည့်ပေးပါဦးလို့’
ရာသီလာတာကို ဘာကြောင့်ဂုဏ်ယူသင့်သလဲ?ငယ်ငယ်တုန်းက ဓမ္မတာရာသီလာတာ ရှက်စရာလို့ထင်ဖူးတယ်။ ရာသီသွေးက တကယ်ညစ်ပတ်တယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်။ဒီအချက်အလက်တွေကို မသိခင်တုန်းကပေါ့။
လူသားတွေ ဆုတောင်းဖို့ သွားတဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဒီလောက်နာကျင်နေတဲ့အချိန် ဘာလို့ သွားပြိး ဆုတောင်းခွင့်မရကြတာလဲ? ဘုရားဆိုတာ ဖေးမကယ်တင်ရှင်လို့ ခံယူနေတဲ့အချိန် ဒီမိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ သူတို့ဆီ ခိုလှုံခွင့်မရတာလဲ?
09 407 134 455